Chitupa cheEC chinhu chikuru chinodiwa, chinoumba musimboti wekuraira kweEuropean muEuropean Union muna Chivabvu 7, 1985, (85 / C136 / 01), nzira nyowani yekushambadzira kwetekinoroji uye chiyero chechisarudzo chinoda sechinangwa che kuumba nekushandisa rairo ine chirevo chaicho, icho chinogumira kuzvigadzirwa hazviise panjodzi kuchengetedzeka kwemhuka yemunhu uye zvigadzirwa maererano nezvinodiwa zvekuchengeteka, panzvimbo pehunhu hwese hunodiwa, kurongeka kwekurayira zvinongodiwa chete, kuraira kwakawanda zvinodiwa basa rakajairikaKana icho chigadzirwa chikasangana nezvakakosha zvinodikanwa zvemirairo inokodzera, mucherechedzo weEC unogona kuwedzerwa, pachinzvimbo chekufunga kuti chiratidzo cheEC chinogona kushandiswa zvinoenderana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro
Iko kudikanwa kwekunyorera CE chitupa
Certification yeEC, zvigadzirwa zvenyika dzese mumusika weEuropean zvekutengesa zvinopa hunyanzvi hwakasarudzika, kurerutsa nzira dzekutengesa chero zvigadzirwa zvemunyika kupinda muEuropean nzvimbo yekutengeserana inofanirwa kunge iri CE chitupa, chigadzirwa chakanyorwa neEC yekumaka uye zvigadzirwa zveEC zvitupa mukati. European Union uye yeEuropean mahara emahara ekutengeserana nyika musika unopfuura CE vakati chigadzirwa chasvika kune eu rairo inoda kuchengetedzwa; Icho chimiro chekuzvipira kwemabhizinesi kune vatengi, izvo zvinowedzera kuvimba kwevatengi muzvigadzirwa .CE mucherechedzo zvigadzirwa zvichaderedza njodzi yekutengesa mumusika weEuropean.
Njodzi yekuvharirwa nekuferefetwa netsika; Njodzi yekuferefetwa uye kubatwa nayo nemasangano anotarisira emusika; Njodzi yekupomedzerwa nevezera rako nekuda kwemakwikwi.
Zvakanakira kunyorera CE chitupa
Huwandu uye kuomarara kwemitemo yeEU, mirau uye zviyero zvekubatana zvinoita kuti ive nguva-yekuponesa, yekuchengetedza-basa uye yekudzora njodzi kuisa rubatsiro kubva kumasangano akasarudzika eu. Tora chitupa cheEC chakatemwa neEU, icho chinogona kuwedzera kuvimba. yevatengi nevatongi vemusika; Inogona kudzivirira zvinobudirira kubuda kwekupomera kusina basa; Panyaya yematare, chitupa cheEC chechinzvimbo chakasarudzwa cheEU chichava humbowo hwehunyanzvi hune mvumo yepamutemo.
CE maka kuraira
Mumakore achangopfuura, munzvimbo yeEuropean hupfumi (iyo European Union, nhengo yeEuropean yemahara yemubatanidzwa, kunze kweSwitzerland) mukutengesa zvigadzirwa pamusika, kushandiswa kweEC chiratidzo kuri kuwedzera, chiratidzo cheEC chakanyorwa nezvakataurwa chakati zvinoenderana nekuchengeteka uye hutano, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kuchengetedzwa kwevatengi, uye nhevedzano yemirairo yekuEurope kuratidza zvinodiwa senge muna Zvita 1997, ec ec raira rakaburitsa chiratidzo cheEC ndeinotevera.
Mechanical kuraira yakaderera voltage kuraira yemagetsi kuenderana kuraira zvekuvakisa zvekushandisa kuraira kumanikidza michina kuraira ruzha kuraira mafaro yacht kuraira lifti kuraira kuputika-chiratidzo kuraira zvekurapa zvishandiso kuraira kwega kuchengetedza midziyo kuraira isina waya kutaurirana kuraira gasi kuraira kuyera chiridzwa kuraira.
Makuriro eEC chitupa
Mucherechedzo weEC unodikanwa neese EU uye EEA nyika. Kubva muna Ndira 2013, EU ine nyika makumi maviri nenomwe, idzo
Nhengo nhatu dzeEFTA: Iceland, Liechtenstein, Norway
Semi-eu nyika: Turkey
Unyanzvi magwaro kuve akagadzirira CE chitupa
1. zita nekero yemugadziri (mumiriri ane mvumo weeu (ane mvumo mumiriri weeu) AR), zita uye modhi yechigadzirwa, nezvimwe; 2. Chigadzirwa chekushandisa bhuku; 3. Zvinyorwa zvekuchengetedza magadzirirwo (kusanganisira kiyi dhizaini dhizaini, ndiko kuti, dhizaini dhizaini inoratidza huwandu uye ukobvu hwekuputira rukoko rwekukwira kure clearance); 4.Chigadzirwa chigadzirwa mamiriro (kana bhizinesi zviyero) uye kumisikidzwa kwehunyanzvi dhata; 5. Dhizaini dhizaini uye dhirowa dhizaini yemidziyo yemagetsi; 6. Rondedzero yezvinhu zvakakosha kana mbishi zvigadzirwa (ndapota sarudza zvigadzirwa zvine European certification chiratidzo); 7. Testing Report; 8 chitupa chakakodzera chakapihwa neNB, mvumo yekupihwa chitupa cheEuropean Union (kune mamwe mamodheru asiri eA mode); 9 setifiketi yekunyoreswa kwechigadzirwa muEU (kune zvimwe zvigadzirwa zvakaita seClass I zvigadzirwa zvekurapa, zvakajairika IVD mu vitro yekuongorora ekurapa ekushandisa); 10. Chirevo chekuteerera (DOC)
Chigadzirwa chigadzirwa cheEC chitupa
1. simba CE chitupa: kutaurirana simba switch switch charger kuratidza simba LED simba LCD LCD simba UPS, nezvimwe.
2. CE certification yemarambi: chandelier, track mwenje, mwenje wechivanze, mwenje weruoko, mwenje wezasi, mwenje we LED mwenje, mwenje, mwenje wechiedza che LED, mwenje wegirobhu, mwenje wegrille, mwenje we aquarium, mwenje weUS, mwenje weUS, mwenje unoponesa magetsi , T8 mwenje, nezvimwe.
3. CE kuisirwa midziyo yemumba: fan, ketera yemagetsi, stereo, TV, mbeva, sipo yekuchenesa, nezvimwe.
4. electronic CE certification: earplug router, mobile phone battery, laser pointer, vibrator, nezvimwe.
5. zvigadzirwa zvekutaurirana CE chitupa: runhare nhare yekupindura muchina main muchina uye fakisi muchina wedhizainiti kadhi interface uye zvimwe zvigadzirwa zvekutaurirana
6 isina waya zvigadzirwa CE chitupa: bluetooth BT zvigadzirwa piritsi isina waya tambo redhiyo, kutaura, kuverenga nekunyora kwegonzo isina waya transceiver redhiyo isina waya maikorofoni kure isina waya netiweki dhizaini isina waya mufananidzo kutapurirana system uye zvimwe zvakaderera simba tambo zvigadzirwa, nezvimwe;
7. CE certification yezvigadzirwa zvekutaurirana zvisina waya: 2G nhare mbozha 3G nhare 3.5g nhare mbozhanhare DECT nhare (1.8g, 1.9g bhendi) isina waya walkie-talkie, nezvimwe.
8. michina CE chitupa: peturu injini yemagetsi yemoto yekuchina muchina CNC yekudhiza muchina chigayo chigayo uswa mower simudza kubaya muchina wekuwachisa chigurudza dhizaini yekugezesa bvudzi mvura yekurapa michina peturu muchina wekudhinda michina michina yekuveza michina inotenderera yekuchera huswa yekucheka chando chando chimbuzi purinda purinda yekucheka roller yekucheka muchina wekucheka muchina wakarurama michina yechikafu chesimbi yemushini wehuswa, nezvimwe;
9. CE kubvumidzwa kwemidziyo yekurapa
Cherechedzo yeEC chitupa
Unoda kuita CE chitupa, teerera kutsvaga chiremera CE zvitupa, mushure mekuyedza zvigadzirwa zvinogoneswa kuburikidza neEC chitupa ichokwadi CE chitupa, shenzhen Anbotek ember kuyedza zvakasiyana neEC agency share / CE kubvunza nekambani yeEC yekuona, ine nyanzvi yakazvimirira murabhoritari, ruzivo rwakapfuma muEC chitupa, inogona kupa imwechete-yekumisa yakazara uye yekuyedza uye yekuvhenekesa masevhisi, Britain neUnited States58 nyika nenzvimbo, kusanganisira Germany, vasvika mukuwirirana zvibvumirano, uye gwaro rekuyedza rine kutendeseka kwepasi rose. Seye CE setifiketi yekambani ine chiremera CE chitupa sangano, iri rechitatu bato rabhoritari yekusimudza mutemo weGerman TUV, uye inogona kuve mumiriri weGerman tuv-ce certification.
European Union CE chitupa inosarudza Anbotek kuyedza masheya, kugamuchirwa kuitisa CE chigadzirwa kubvunzana uye CE chigadzirwa chitupa
Anbo yekuyedza co., LTD inopa ingangoita ese CE kuraira chigadzirwa kuyedza uye chitupa, kuitira kuzadzisa izvo zvinodiwa nevagadziri kunama CE mucherechedzo. Anbo ndiye CE advertising masimba muShenzhen. Kana iwe uchifarira rumwe ruzivo nezve CE chitupa, ndapota taura nesu pa0755-26014755 / 26066440